सूर्य चिन्ह भएको पार्टी छाडे मेयर, उपमेयर सबै पद रद्द – Newsharpal24
सूर्य चिन्ह भएको पार्टी छाडे मेयर, उपमेयर सबै पद रद्द
January 5, 2021 January 5, 2021 adminLeaveaComment on सूर्य चिन्ह भएको पार्टी छाडे मेयर, उपमेयर सबै पद रद्द
नेकपाको (प्रचण्ड–नेपाल) समूहका स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृहजिल्ला पुगेर आफूहरूले नेतृत्व गरेको नेकपा मूल पार्टी भएको दाबी गर्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई भने, ‘तपाईंंहरूले आचरणअनुसार काम गर्नुभएन भने मेयर, उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षबाट पार्टीले हटाउन सक्छ ।’नेता भट्टराईले झापामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै संस्थापनतिर नलागे स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसभा पद नै धरापमा पर्ने बताए ।
‘म स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि साथीलाई भन्न चाहन्छु, पार्टी विभाजन भयो भने तपाईं कुन पार्टीको हो ?सूर्य चिह्न हामीसँग हुन्छ, पार्टीको नाम हामीसँग हुन्छ, हँसिया–हथौडा चिह्न हामीसँग हुन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘तपाईंले दलसम्बन्धी कानुन पढ्नुभएको छैन भने स्थानीय तहका साथीहरू गएर पढ्नुहोला । यदि तपाईंले दलको आचरणविपरीत काम गर्नुभयो भने पार्टीले हटाउन सक्छ । पार्टी सदस्यबाट मात्रै होइन, फलाना ठाउँको मेयरबाट, फलाना ठाउँको गाउँपालिकाको अध्यक्षबाट पनि हटाउन सक्छ ।’नेकपाको आधिकारितालाई लिएर निर्वाचन आयोगमा दुवै पक्षका दाबी छन् । तर, भट्टराईले विभाजनमा ओली समूहमा लागेका जनप्रतिनिधिको पद धरापमा पर्न सक्ने चेतावनी दिए ।
‘तपाईं सूर्य चिह्नबाट लडेको हो भने सूर्य चिह्नको पार्टीमा आउनुस् । होइन, हामी भड्खालोमा जान्छौँ भन्नुहुन्छ भने जानुस् । तपाईंको ठाउँमा उपमेयर होलान्, उहाँले गरिहाल्नुहुन्छ नि ! तपाईंको ठाउँमा उपाध्यक्ष होलान्, उहाँले गर्नुहुन्छ नि ! त्यो पनि हुनुभएन भने सिनियर वडाध्यक्ष उम्मेदवार छन्, के फरक पर्छ !’ भट्टराईले चेतावनी शैलीमा भने, ‘तर, यो कानुन तपाईंहरू धेरैलाई थाहा छैन है । गएर पढ्नुहोला । मैले ध म्की दिएको होइन, सम्झाएको हुँ । मेरो दायित्व तपाईंहरूलाई सम्झाउने हो । कतिपय ठाउँमा उपमेयर साथी तयार भएर बस्नुस्, मेयर हुँदै हुनुहुन्छ छिटै ।’
दुईतिहाइको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघट गर्नु संवैधानिक : पोखरेल
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रथम अध्यक्ष र महासचिव आफूहरूसँग रहेकाले आफूहरू नै संस्थापन पार्टी भएको दाबी गरे । केपी ओलीभन्दा माथि अरू कोही नेता नरहेको भन्दै उनले दुईतिहाइको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघट गर्नु संवैधानिक भएको जिकिर गरे । पार्टी फुट्न नदिन आफूहरूले वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावसमेत गरेको, तर प्रचण्डले रोकेको पोखरेलको भनाइ थियो ।
Tagged उपमेयर सबै पद रद्दसूर्य चिन्ह भएको पार्टी छाडे मेयर
म्यादी प्रहरीमा खुल्यो भर्ना! कति उमेर र तौल भएकाले दिन पाउनेछन् आबेदन!!(पूरा पढनुहोस्)
कन्सर्ट हेर्न जाँदा भीडमा किचिएर इलामकी अनिताको मृत्यु